परिवारमा कोरोना फैलनबाट रोक्न चाहानुहुन्छ भने मास्क लगाउनुहोस - अध्ययन -परिवारमा कोरोना फैलनबाट रोक्न चाहानुहुन्छ भने मास्क लगाउनुहोस - अध्ययन -
परिवारमा कोरोना फैलनबाट रोक्न चाहानुहुन्छ भने मास्क लगाउनुहोस – अध्ययन
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २०:४५ मा प्रकाशित
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणको बीचमा, यसको रोकथाम गर्न सबै उपायहरू चालिएका छन्। सबै प्रयासहरूको बाबजुद, कोरोना संक्रमण हरेक दिन बढ्दैछ। यसको खोप लागू नभएसम्म, सामाजिक दूरी यसलाई रोक्ने एक प्रभावकारी तरीका हो भनिन्छ। थप रूपमा, मास्कहरू प्रयोग गर्न र सफा राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
मास्कको प्रयोगमा गरिएको नयाँ अध्ययनले यो कुरा पत्ता लगाएको छ कि घरमा मास्क लगाउनु पनि संक्रमणलाई रोकथाम गर्न प्रभावकारी छ। अन्वेषकहरूका अनुसार परिवारमा सदस्यको अगाडि घरमा मास्क लगाउनुले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखाउँदा यसले परिवारमा फैलिनबाट जोगिन सक्छ।
यो बीएमजे ग्लोबल हेल्थ हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनमा भनिएको छ। यो अध्ययन चीनका परिवारहरूमा गरिएको थियो। यसले देखाउँदछ कि परिवारमा पहिलो व्यक्तिको अघि घरमा मास्क लगाउनु भनेको संक्रमणको रोकथाममा संक्रमणको संकेत ७९ प्रतिशत प्रभावकारी हुन सक्छ।
अन्वेषकहरूले रिपोर्ट गरे कि लक्षण पछि घर मास्क लगाएर संक्रमण रोक्न मद्दत गर्दैन। अन्वेषकहरूको यस टोलीले बेइजिङ रिसर्च सेन्टर फर प्रिभेन्टिभ मेडिसिनका शोधकर्ताहरू पनि समावेश गर्दछ।
परिवारमा संक्रमण हुनबाट बचाउन मास्कको उपयोगिता पत्ता लगाउन अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वव्यापी महामारीको बेला बेइजिङको १२४ परिवारका सरसफाइ बानीसँग सम्बन्धित ४६० जनालाई सोधे।
अध्ययनले देखाएको छ कि दैनिक कीटाणुनाशकहरूको प्रयोग, झ्याल खोल्ने र कम्तिमा एक मिटरको दूरी कायम राख्दा संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ।
अन्वेषकहरुका अनुसार यदि एक परिवारको सदस्य संक्रमित छ र झाडापखाला छ भने परिवारका अन्य सदस्यहरुमा संक्रमित हुने खतरा छ। यस बाहेक, सँगै खाना खाने वा सँगै टिभी हेर्ने जोखिम १८ गुणा बढ्छ।
उनले भने कि घर सफा गर्न र मास्क लगाउन नियमित रूपमा ब्लीच वा कीटाणुनाशकको ​​प्रयोगले संक्रमणको जोखिम कम गर्दछ। उक्त अध्ययनले देखाएको छ कि लक्षणको अगाडि मास्क लगाएर ७९ प्रतिशत र कीटाणुनाशकहरूको प्रयोग ७७ प्रतिशत संक्रमणको रोकथाममा प्रभावकारी थियो।
कोरोनालाई बढ्नबाट रोक्न औषधी पत्ता लगाएको वैज्ञानिकहरूको दाबी
प्रचण्डसहित शीर्ष नेताको छुट्टै भेला, थप रणनीति बनाउने तयारी
खड्गप्रसादको ‘स्वेच्छाचारी’विरुद्ध शीर्ष नेता एकमत, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा एउटै विकल्प
कोरोना संक्रमितलाई निको पार्ने प्लाज्मा थेरापी के हो ? कस्ता बिरामीहरुलाई दिइन्छ ?
विकासको नमूना बन्दै बागमती नगरपालिका